Sebenzisa ukungeniswa kweNtlalontle kuhlalutyo lweRetail yokuQikelela | Martech Zone
Sebenzisa ukuNgena kweNtlalontle kuhlalutyo lweRetail
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 30, 2016 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 29, 2016 Douglas Karr
Senze ukubonisana okuninzi kumzi mveliso wethu neenkampani eziye zaphuhlisa iindawo zokugcina idatha ezixabisekileyo. Amaxesha ngamaxesha, ezi nkampani zinomceli mngeni wokunyusa ifuthe lokuthengisa kwazo, zikhulise isabelo sazo sentengiso, kwaye ziyenze ngokusekwe kwiimveliso zazo kunye nokunikezelwa kwenkonzo. Xa simba nzulu kancinci kumaqonga abo, nangona kunjalo, sifumanisa ukuba baqokelele iintaba zedatha engasetyenziswanga.
Nayi eminye imizekelo kwicandelo lokuThengisa nge-imeyile:
Kutheni iinkampani zentengiso ze-imeyile zingakwazi ukubonelela ngomgangatho ukugcinwa, Cofa, uvule kwaye uguqule idatha yabathengi kunye namashishini ukulinganisa impumelelo yabo? Kuya kufuneka ndikwazi ukubona ngokulula ukuba uluhlu lwam lokufumana kunye neenzame zokuzigcina ngokuthelekiswa neenkampani ezifanayo ezineefemagraphics ezifanayo ukubona ukuba ndiqhuba kakuhle okanye hayi.
Kutheni le nto iinkampani zentengiso ze-imeyile zingakwazi ukubonelela ngohlalutyo oluchazayo ukuba intengiso isekwe ekukhuleni nakwimigangatho yababhalisi kuluhlu lwakho lwe-imeyile? Ngaba uyazi nokuba lixabiso lababhalisi bakho ngokusekwe kukukhumbula kwabo, umsebenzi, iJografi, kunye nedemografi?
Kutheni iinkampani zokuthengisa nge-imeyile zingakwazi ukwakha oovimba be-imeyile abazihlaziya ngokuzenzekelayo iidilesi ze-imeyile kwiiakhawunti, okanye bazisuse xa begxuma kwiakhawunti enye? Kutheni le nto inkampani yentengiso ye-imeyile ingababuzi ukuba bangathanda ukuvuselela ulwazi lwabo kubo bonke abathengi okwabelwana nabo kwiqonga elinye?
Ukuba uqala ukumba idatha, uya kubona ngoko nangoko ukuba kungamangalisa njani ukuba neenkqubo kunye nedatha kuyo nayiphi na inkampani. Khawufane ucinge ngezigqibo onokuzenza ngokubhekisele ekubeni ube nokufikelela kubukrelekrele kubo bonke abathengisi kunasesisele soluhlu lwakho?
Nayi eminye imizekelo ngaphakathi kushishino lwezoLuntu:
Kutheni le nto iqonga elifana ne-Twitter lingakhi ubukrelekrele bonxibelelwano? Nokuba yeyiphi na imfutshane okanye ngubani okhuthaza ikhonkco, i-Twitter inokubonelela ngenani elingenangqondo ledatha eya kuthi inike ingxelo epheleleyo kumashishini kwimpembelelo yomxholo, ukunyusa, kunye neenkqubo zokukhuthaza. Khawufane ucinge xa ​​sele ukwazi ukubona umthi omnandi wedatha obonelela ngobomi bekhonkco- ukusuka kwisizukulwana, ukuya ekwabelaneni, ukufikelela, ukufikelela, ukucofa ... kuwo wonke umsebenzisi we-Twitter owabelanayo okanye ophindayo? Ndikhankanyile oku kwishishini kwiveki ephelileyo kwaye bathi baya kuhlawula ngokupheleleyo ukufikelela kule datha. Endaweni yoko, i-Twitter ayiboneleli nganto kwaye sinyanzelwa ukuba sixhomekeke kwidatha emnyama kunye nekhonkco ezimfutshane ukuzama ukubuyisela umva ifuthe.
Nanku umzekelo omangalisayo ovela kumacala amane. Xa uChipotle wayenemicimbi ngokhuseleko lokutya, Isikwere sinakho ukubeka esweni ukuhamba kweenyawo kwiivenkile kwaye ekugqibeleni, qikelela ilahleko:
Isiphumo? I-Chipotle ibhengeze umvuzo wayo wekota yokuqala kunye noqikelelo lwe-Foursquare belujolise-nge-30% yokuhla kwintengiso. Amacala amane akakwazanga kuphela ukuqikelela ilahleko, ayakwazi nokwenza uqikelelo olomeleleyo:
Siyakholelwa ekubeni ukwehla okungama-23% kwitrafikhi yonyawo olufanayo lelona nani linentsingiselo ekufuneka abaninizabelo bagxile kuyo, endaweni yokwehla kwe-30% kwintengiso. Ibonisa ukuba uChipotle wakha ukuthembana kunye nabathengi, okubaluleke ngakumbi kwimpumelelo yexesha elide. UJeff Glueck, umphathi we-Foursquare.
Ndingakukhuthaza ukuba ufunde Isithuba esipheleleyo sikaMnu, inomdla!
Iimpawu xa kuthelekiswa nobukrelekrele
Ndisebenze nenkampani enye eqokelele ngaphezulu kwe-1 yezigidigidi zeefektri kwindawo yokugcina idatha enkulu, kodwa bebejolise ngakumbi ekukhuleni kohlahlo-lwabiwo mali lwabo ngaphezu komgangatho kunye nexabiso ledatha ababeyiqokelele. Sibatyhale nzima ukucoca idatha kwaye siqeshe isazinzulu sedatha. Khange babenayo kwaye ukusukela oko bavaliwe… nentaba yedatha engafakwanga ebinokubaluleka ukuba igcinwe ngcono kwaye yembiwa ngokuchanekileyo.
Iinkampani ezininzi zibeka isitokhwe ngakumbi kwaye zityala ixesha elininzi kwiimpawu zazo. Iimpawu zipholile, kodwa zinokukhutshelwa ngokulula. Ubukrelekrele bokunceda abathengi baphumelele kwaye amashishini akhuphisane abaluleke ngaphezu kwayo nayiphi na ikhowudi yekhowudi.
Idatha yimpahla engakholelekiyo ekungafanelekanga ukuba iqondwe ngenxa yezizathu ezibini:
Igunya -Ukumba imigodi yedatha yakho kunye nokubonelela ngophando olusisiseko kwizikhundla zakho zeshishini wena njengenkokeli.
ixabiso -Ukunikwa ukhetho lwento eyenza ukuba ubomi babasebenzi bube lula okanye idatha eyanceda isigqeba ukuba senze izigqibo ezingcono, ndiza kuyikhetha idatha ngalo lonke ixesha.
Luhlobo luni lwegolide ohleli phezu kwayo?
tags: idatha enkuluChipotleukugcwala kweenyawoezineUhlalutyo oluqikelelweyoImidiya yokuncokola
Uphi uWesley? Impumelelo ye-SXSW kuHlahlo-lwabiwo mali oluncinci
Ukuqwalaselwa kunikwe wena, Igunya lithathwa nguwe